Azoko esorina ve ny fampirimana Msdtadmin TEMP? - Faq
Tena > Faq > Msdtadmin in temp - ahoana no hamahanao
Msdtadmin in temp - ahoana no hamahanao
Azoko esorina ve ny fampirimana Msdtadmin TEMP?
lahatahiry:msdtadmin afakatsy ho voafafa - rakitra ao anatylahatahiryampiasaina. ... Mariho fa ny Windows 10 dia mandray ny kaonty ampiasain'ny Downloadslahatahiry, Recycle Bin, kinova Windows taloha (Windows.19 Sep 2019
Ah, eny, ilay virus System32 malaza ratsy izay misy amin'ny Windows PC rehetra, tsy izany tokoa, mazava ho azy fa efa naheno vazivazy isika fa ny system32 dia viriosy iray hamafana, fa raha ny marina dia lahatahiry Windows manakiana izany. Fa inona no hitranga raha mamafa ianao system32? Mazava ho azy fa tsy ho afaka boot intsony i Windows, fa azonao atao ve ny mamerina azy io amin'ny fomba hafa? Firy ny fahasimbana mety ho vitany raha namafa azy ianao ary mbola miasa Windows? Inona no hitranga? Eny, izany no hataontsika amin'ity lahatsoratra ity, hanao fampisehoana an-tany tena izy isika ny amin'izay hitranga raha hamafana ny system32 amin'ny solosainao ianao, ary nanao izany haingana talohan'ny nataontsika, toy izany koa toe-javatra Nahoana? Tsy miditra amin'ny hoe inona marina ny system32 ary ny antony maha-zava-dehibe azy satria misy lahatahiry Windows maro. Ka inona ny olana lehibe amin'ity iray ity? Araka ny efa noresahiko teo aloha, ny System 32 dia manana rakitra an-taonina izay ilaina tsy ho an'ny Windows ihany, fa ho an'ny programa antoko fahatelo izay mandeha amin'ny Windows. Anisan'izany ny famakiam-boky nozaraina toy ny Dynamic Link Library na Hardware DLL ary misy aza ny programa Windows izay natsangana toa ny Task Manager na Notepad allExist ao amin'ny folder System 32 ary misy folder hafa mitovy amin'izany ao amin'ny lahatahiry Windows antsoina hoe SysWow64 sy 64 mijoro ho an'ny Windows 32-bit amin'ny Windows 64-bit ary raha ny tena izy dia misy tranomboky 32-bit maromaro sns, ary ny system 32 kosa dia manana tranomboky 64-bit.
Eny e, raha ny System 32 no manana ny zavatra 64-bit ary ny SysWOW64 dia manana zavatra 32-bit dia tsy misy dikany izany raha ny tokony ho izy dia natao ho an'ny fampifanarahana mihemotra fotsiny avy amin'ireo mpamorona izay tsy tena nikasa mialoha akory, fa tsy ilaina intsony ny milaza izany zavatra izany ao amin'ny rafitra 32 ny fampirimana dia ampiasain'ny saika ny zava-drehetra, noho izany dia tsara kokoa raha hamafa ny loza manjo anao amin'ny fametrahana windows. Raha ny tokony ho izy dia tsy azonao atao ny mamafa ny folder 32. Voaro amin'ny alàlan'ny alalana izany.
esory ny birao birao
Ka na dia nanandrana aza ianao dia hiteny fa ny fahazoan-dàlana hanao izany tsy nahy dia tsy azo atao amin'ny ankapobeny, ary na dia manandrana aza ianao, raha tsy fantatrao ny fomba fiasa manodidina ireo zavatra ireo dia tsy manana ahiahy ianao hamafa tsy nahy ny system32, fa amin'ity tranga ity izahay tena te hamafa ny system32. Ka dia handeha hilalao miaraka amin'ireo alalana aho ary hanome ny fidirako mba hahafahako mamafa azy izao. Tsy hasehoko anao ny fomba fanaovana sy ny fanaovana izany rehetra izany satria somary manahirana izany ary tsy tiako ho fantatrao ny fomba fanaovana prank ny namanao amin'ny fanimbana ny solosain'izy ireo hanapotehana ny fametrahana solosaina mahazatra, izahay izahay izao amin'ny varavarankely ary manana ny tombony hamafana ny fisie rehetra aho ary mbola misy fiarovana hafahafa ihany.
Ohatra, mety tsy ho vitako ny mamafa ny zava-drehetra ampiasaina sy mahita satria lisitra rafitra izany zavatra sasany ampiasaina nefa mbola maro ny zavatra. Zava-dehibe izany azoko hamafana. Ka dia hifalifaly be eto isika.
Fafao ny zavatra rehetra vitako rehefa manadio mamafa ny zava-drehetra aho. Karazany manakana ahy io ary tsy mamafa na inona na inona. Ka hanandrana hamafa ampahany lehibe indray miaraka aho ary ho hitanao raha mamafa ny folder sy DLL aho dia ampidirina ao anaty fako ary rehefa mijery ao ianao dia afaka mahita zavatra maromaro voafafa ka tena , Manangana faran'izay betsaka araka izay azo atao aho amin'ny famafana lehibe ary mamafa azy io toa toa mamafa ahy ny ankamaroan'ny dlls sy ny toy izany, saingy tsy avelan'ny fisie hamafa zavatra ao aho satria raha misy zavatra iray dia hafahafa ilay izy. , angamba fahazoan-dàlana fanampiny fanampiny sy fitandremana fiarovana tafiditra manokana ao anatin'ity fampirimana ity Nefa toa mbola afaka mamafa ny sombin-javatra tsara ihany aho ary manome toky fa handrava ny zava-drehetra izany.
Ka amin'izao fotoana izao dia efa namafa zavatra be dia be aho ary efa hafahafa ny rafitra. Afaka mahita ianao fa tsy afaka mampiasa be dia be rehefa manandrana manindry zavatra. Aza hadino izany fa mipoitra ny menus ary foana fotsiny ilay izy na mianjera, tena tsy misy hafatra diso tampoka na aiza na aiza, ary na dia manandrana mamerina amin'ny fipihana ny menio fanombohana aza aho dia tsy mampiseho na inona na inona ilay bokotra herinaratra.
Ka na tsy misy restart aza dia tapaka ny rafitra amin'ny ankapobeny. Tsy afaka mahita ny fanombohan'ny mpitantana ny lahasa ianao. Amin'io fotoana io dia potika ny zava-drehetra, fa farafaharatsiny mbola mandeha ihany i Windows.
Ny hataoko dia hamerina amin'ny tanana ny milina virtoaly ary jereo izay hitranga aorian'izay. Ka izao vao averiko fotsiny izy io ary afaka miandry azy io isika ary ho hitanao tsara fa Niezaka nivadika ho fanamboarana mandeha ho azy avy hatrany, fantatrao avy hatrany fa misy tsy mety ary tsy natomboka ny Windows ary milaza Diagnose your solosaina ary nahavita fahavoazana be dia be. Jereo izao, milaza fa tsy afaka manamboatra ny PC-nao ny Fanamboarana mandeha ho azy, ka angamba mila mamerina mametraka indray ny Windows isika amin'izao fotoana izao mba hampandeha indray ity solosaina ity, raha toa ka solosaina tena izy dia jereo izay misy mba hahafahantsika manao kitiho ny famerenana ity PC ity ary jereo izay mitranga.
Esory ny zava-drehetra ary na dia eny fa na dia tsy mandeha aza izany, midika izany fa nisy olana tamin'ny famerenana ny PC ny sasany amin'ireo safidy hafa amin'ny famahana olana eto amin'ity tontolon'ny Windows ity ary tsy misy zavatra tena eto hamaha azy. Ka rava tokoa ity fametrahana Windows ity Ny solosaina mihitsy dia mazava ho azy fa tsy mbola azonao atao ny mametaka Windows azy io saingy tena hanaintaina tokoa io fampisehoana io. Hitantsika fa tsy nahagaga izany.
Inona no mitranga rehefa mamafa ny system32 ny fametrahana Windows ianao dia simba mandra-pamerenanao tanteraka ny Windows ary tsy afaka manao na inona na inona miaraka aminy ianao na dia amin'ireo fiasa fanarenana voaorina aza. Tsy ho afaka amboarina izany Ka ankehitriny, amin'ny ho avy, raha efa nanandrana mamafa ny system32 fotsiny ianao mba hahitana izay mitranga ankehitriny, dia tsy mila izany ary ho fantatrao fa tsy mendrika hatao akory izany. ny namana satria mety tsy ho vitanao mihitsy ny manamboatra azy io, ary ho sosotra izy ireo raha tsy maintsy entin'izy ireo any amin'ny fivarotana solosaina hametrahana indray ny Windows sy ny angon-drakitra rehetra fonosiny. Tsy dia mendrika izany.
Na izany na tsy izany, antenaina fa tsy lava loatra ity lahatsoratra ity. Ataoko angamba fa tsy izany. Ampahafantaro ahy ny hevitrao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Efa namafa tsy nahy ny system32 ve ianao? Te handre momba izany aho. Ary raha te hijery hatrany ianao dia handefa lahatsoratra vitsivitsy hafa eto. Azonao atao ny manindry azy ireo fotsiny ary raha te-hisoratra anarana ianao dia hanao lahatsoratra vaovao roa isan-kerinandro aho, noho izany dia mendrika izany.
Dia misaotra indray ry zalahy nijery. avelao hahita soa ianao
Inona ny lahatahiry Msdt?
MSDTmidika hoe Microsoft Support Diagnostic Tool, fitaovana namboarina ao Windows izy io izay azo ampiasaina hamantarana sy hamahana ny olan'ny Windows. Ity dia azo ahetsika rehefa nifandray tamin'ny Microsoft Support Engineer ianao ary nanome PassKey anao.17 Okt 2017
Salama Windows Universe! Michael miaraka amin'izao rehetra izao Windows! Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fitantanana troubleshooter Windows ao amin'ny Windows 10 hamahana olana. Toy ny mahazatra, amin'ny famaritana etsy ambany dia hampifandraisinay lahatsoratra iray izay lasa lavitra kokoa. Amin'ny maha-fampitandremana azy, ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny fanavaozana ny Windows 2004, noho izany ny sasany amin'ireo torohevitra sy efijery dia mety tsy hitovy amin'ny fananganana teo aloha.
Ao amin'ny menio asa ao amin'ny bara fitadiavana, soraty ny troubleshooting ary sokafy ny fikirana fikirakirana olana. Araka ny hitanao dia misy safidy telo fanolorana vahaolana. Alefaso mandeha ho azy ilay troubleshooter ary aza ampandrenesina ianao, mihazakazaha ho azy ilay troubleshooter ary avy eo mampandre anao sy ny fanontaniana fahatelo alohan'ny famahana olana.
Azonao atao ny mahita fa misy troubleshooter maro izay anoloran'i Windows ny fihazakazahana eo noho eo. Azonao atao ny manindry hijerena ny tantaran'ny famahana olana, ary avy eo dia misy bokotra fanampiny famahana olana. Ny Bluetooth dia mahita sy manamboatra ny olana rehetra amin'ny fitaovana Bluetooth.
Ny troubleshooter Connection Inbound dia afaka manampy anao hahita sy hanamboatra olana amin'ny fifandraisana amin'ny solosaina miditra sy ny firewall anao. Raha manana olana ny fitendry anao dia ampandehano ilay troubleshooter fitendry. Raha manana olana amin'ny fifandraisana tsy misy tariby sy ny tamba-jotra hafa ianao, ny troubleshooter adapter an'ny tambajotram-pifandraisanao dia ny toerana halehanao.
Rehefa manana olana momba ny herinaratra ianao, ny famahana olana amin'ny famatsiana herinaratra no toerana voalohany alehanao. Izy io dia mety indrindra ho an'ny solosaina finday izay manana fiainana bateria fohy. Raha misedra olana amin'ny fampandehanana programa efa zokinjokiny amin'ny sehatra Windows 10 ianao dia loharano tena tsara ny troubleshooter mifanentana amin'ny programa.
Ny troubleshooter fandraisam-peo dia hanampy anao amin'ny olana momba ny mikrô sy ny fifehezana ny feo. Raha manana olana amin'ny fitadiavana zavatra ao amin'ny Fikarohana Windows ianao, ny Troubleshooter amin'ny fikarohana sy ny fanoratana dia ny safidinao voalohany. Ny troubleshooter fampirimana ifampizarana dia zavatra tokony hampiasaina raha manana olana amin'ny fidirana amin'ny rakitra sy lahatahiry amin'ny solosaina hafa ianao.
Raha mampiasa Cortana na programa fankasitrahana kabary hafa ianao dia atombohy amin'ny alàlan'ny fandefasana ilay mpandika teny. Olana amin'ny filalaovana sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra na lahatsoratra, Eny, azonao atao ny mahita sy manamboatra olana amin'ny famerenana lahatsoratra, raha manana olana amin'ny fampiharana Windows Store ianao dia alefaso ny troubleshooter an'ny apps Windows Store. Raha mila fanampiana amin'ny fitadiavana sy famahana olana mifandraika amin'ny Internet na tranokala ianao dia alefaso ny fikirakirana olana amin'ny Internet.
Afaka mahita sy manamboatra olana amin'ny troubleshoot audio ianao rehefa milalao. Ity misy iray mety ilain'ny olona maro, ny fahitana sy ny fanitsiana ny olana amin'ny fanontana dia azo vahana amin'ny olanao fanontana. ary raha vao avy nisintona fanavaozana ny Windows ianao ary tsy afaka mihazakazaka azy, na manana olana fotsiny amin'ny fanavaozana Windows dia mihazakazaha troubleshooter Windows update.
Misy fomba iray hijerena ireo troubleshooter bebe kokoa. Mandehana any amin'ny Control Panel, mankanesa any amin'ny Item Control Panel rehetra, mandehana amin'ny troubleshoot, kitiho ny View All, ary araka ny hitanao dia hahita programa vitsivitsy hafa momba ny famahana olana toy ny: B. Maintenance System, Internet Explorer Security, Internet Explorer Performance.
Ankehitriny, misy troubleshooter manan-danja iray hafa, saingy tsy voatanisa na aiza na aiza ao amin'ny troubleshooter ny Hardware sy ny Device. Mbola misy io, fa mila mandray dingana fanampiny fanampiny ianao hampiasana azy. Sokafy ny mailaka avy hatrany.
Tiako ny mampiasa ny fidiran'ny mpitantana sy ny karazana msdt dot e x e habaka diagnostika fitaovana hyphenid ​​ary miditra enter. Hahita boaty fifanakalozan-kevitra azonao ampiasaina hivoahana olana amin'ny fitaovanao sy ny fitaovanao ianao. Nanampy anao ve ity lahatsoratra ity? Misy fitaovana fikirakirana olana ve izay tsy voatanisa intsony izay fantatrao amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany; ary raha misy hack hafa manampy bebe kokoa eo amin'ny tontolon'ny Windows 10 dia tsidiho ny tranokalanay thewindowsclub.com Ary hey, raha ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hanome isa sy hisoratra anarana amin'ny fantsonay izay ampidirinay atiny vaovao hatrany ny nomerika nomerika Ho fanaovan'izao rehetra izao. tsara kokoa.
Inona no tehirizina ao anaty temp?
'TEMP”Fampirimana, araka ny tondroin'ny anarana, dia ampiasaina hitahirizanavonjimaikafisie sy lahatahiry izay noforonin'ny serivisy Windows sy programa rindrambaiko antoko fahatelo. Hatramin'ny fisie sy ny lahatahiryvoatahiry ao amin'ny Tempfampirimana diavonjimaika, azo antoka tanteraka ny fanesorana azy ireo.
40% - ny ankamaroan'ny enta-mavesatra nividy dia niafara tao amin'ny fako. 40%! Ny meloka: fitehirizana tsy mety. Andao hojerentsika ny fepetra iarovan'ny vokatra mahazatra sasany ao an-dakozia arovana ary afaka manangom-bola ianao! Ary raha manana ohatra manokana ianao, avelao izy ireo etsy ambany! 1.
Ireo tantsaha voatabia dia hilaza aminao fa mihamofona sy manitra kokoa ny voatabia raha mitazona azy ireo amin'ny mari-pana (70 ° F) na avo kokoa ianao. Rehefa ataonao ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo dia ho very ny fananany tsara indrindra ary hiova ny tsiro. Tsara kokoa ny mividy voatabia vaovao amin'ny ampahany kely azonao hanina ao anatin'ny iray andro.
Raha nitombo azy ireo ianao dia tazomy eo amin'ny faran'ny vata fampangatsiahana. Ny voatabia masaka koa dia mahatonga ny voankazo sy legioma hafa masaka haingana na simba rehefa masaka sahady. Raha tsy mila akondro mainty na serizy lo ianao, tahirizo misaraka ireo vokatra ireo. 2-3.
Tongolo sy tongolo lay ireto legioma ireto maniry ny hafanana mafana kokoa. Matahotra hazavana ihany koa izy ireo ary tsy te hotehirizina ao an-dakozia feno masoandro rehefa ao anaty pantry mangatsiatsiaka na maizina. Tsy tokony hotehirizina ao anaty vata fampangatsiahana ihany koa izy ireo.
Ny rano mangatsiaka sy manondraka dia mety hanimba azy ireo. 4. Ovy Ovy frantsay na ovy nendasina dia misy zavatra mety misy poizina rehefa tehirizina amin'ny maripana ambany.
Ka aza atao ao anaty vata fampangatsiahana Fries! Raha ny ovy manta no jerena dia tian'izy ireo ny Toerana iray maizina sy maina ary malalaka. Mamoaka dioksidan'ny karbaona ny ovy. Ka raha mitazona azy ireo amin'ny toerana misy rivotra malemy ianao dia hanomboka ketrona. 5.
rsop.msc tsy hita
Holatra Raha te handroa azy ireo ianao ao aoriana dia ataovy ao anaty harona taratasy ny holatra ary tazomy ao anaty vata fampangatsiahana raha mila tazomina lava ianao, sasao sy hoamaina na hamafana azy ireo aloha. Tsy tsara ny mitazona holatra vaovao ao anaty vata fampangatsiahana. mandritra ny 1 andro mahery, indrindra raha ny tenanao no naka azy ireo. Rotika izy ireo na manjavozavo. 6.
Legioma sy anana vaovao dia olona maro no mametraka legioma ao anaty rano vera toa anao manao fehezam-boninkazo. Toa tendrony mahasoa fa toa hevitra ratsy. Haharitra kokoa ny ahitra vaovao raha apetrakao ao anaty vilany isan-sachet izy ireo ary tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny taratasy dia hisitrika hamandoana fanampiny ary tsy hampanjavona ny maitso.7-8. Akoho amam-borona ary hena Tsara kokoa ny mividy azy alohan'ny handrahoana sakafo, raha tsy ny sakafonao hariva izao dia esory avy hatrany ny hena sy akoho amam-borona .Raha ianao mila mitazona azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana, fonosina amin'ny fonosana plastika 2-3 sosona ary apetaho amin'ny ambaratonga ambany.
Aza adino fa ny hena dia mety loharanon'ny bakteria mifindra isan-karazany. Tsy maharitra mihoatra ny 2 andro voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana izany raha toa ka tsy maninona ny hitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 4-5 volana. 9-10. Akondro sy voankazo tropikaly hafa Raha tadidinao ny fomba nitomboany dia ho fantatrao fa ny hatsiakan'ny vata fampangatsiahana dia mahatonga ny voankazo tropikaly tsy tsara.
Mba hampihenana ny fizotra masaka sy hitazomana ny hoditra tsy hihamaizina dia ataovy ao anaty harona taratasy misaraka na ny fonosana plastika ny voankazo tsirairay. Arovy amin'ny toerana maizina izy ireo avy eo. 11.
Tantely tantely dia tokony hotehirizina ao anaty kaopy, vilia seramika na vy. Maizina sy maina ny toerana mety, koa tsara ny talantalana raha mbola misy varavarana ny arimoara. Raha mitazona tantely izay ahatongavan'ny tara-pahazavana amin'ny masoandro ianao dia ho very ny fananana miady amin'ny bakteria.
Ny tantely dia afaka mifoka hanitra, ka tokony hialana amin'ny tongolo lay, tongolo, ary vokatra fofona malaza ratsy io. Raha manao tantelinao manokana ianao dia aza mampiasa tavoara pickle taloha noho izany antony izany. 12.Eggs Mifanohitra amin'izay eritreretin'ny mpanamboatra vata fampangatsiahana, tsy tsara ny mitazona atody eo am-baravaran'ny vata fampangatsiahana.
Isaky ny manokatra azy ireo ianao dia miharihary amin'ny mari-pana ambany kokoa amin'ny atody ny atody. Noho io fiovana tsy tapaka io dia manimba haingana kokoa izy ireo. Tehirizo ao anaty boaty izy ireo ary tahirizo eo amin'ny talantalana ambony indrindra miverina ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny baoritra dia manakana azy ireo tsy haka fofona amin'ny alàlan'ny akorany, ary ny lamosin'ny vata fampangatsiahana dia tsy dia mora miovaova amin'ny mari-pana. 13-15. Ny ronono, yaorta ary fromazy mafy Ronono sy yaorta koa tsy tokony hotehirizina ao am-baravaran'ny vata fampangatsiahana - manimba izy ireo haingana kokoa noho ny toerana hafa Ny toerana tsara indrindra hitahirizanao dia ny talantalana afovoany.
Arakaraka ny maha-kely ny ronono na yaourt sisa tavela ao anaty fonosana, vao mainka tokony halaviriny avy eo amin'ny rindrin'ny vata fampangatsiahana, satria mangatsiaka kokoa izy io any. Fonosy ao anaty fonosana plastika na foil ny fromazy mba tsy ho maina ny bobongolo. 16-17. Voaloboka sy voaroy Ny toerana tsara indrindra ho an'ny voaloboka dia kitapo plastika misy rivotra, toy ilay notehirizina sy namidy tamina magazay.
Toy izany koa ny voaroy hafa. Nefa alohan'ny hametrahanao azy ireo ao anaty harona plastika na ao anaty vata fampangatsiahana dia alao antoka fa hamaina azy ireo amin'ny lamba famaohana taratasy izy ireo. Ny fanesorana an'io hamandoana io dia hisorohana ny fivontosana sy ny famotehana.
Raha te hitahiry serizy ianao dia aza esorina ireo fotony ary ario. Raha tsy izany dia ho very ranom-boankazo ary ho simba vetivety ireo voaroy.
Izy ireo koa dia somary mifantina, koa tazomy samy hafa samy hafa ny karazana paoma isan-karazany ary apetaho ao anaty pantry na lakaly, mijanona ao anaty fararano sy ririnina izy ireo rehefa apetrakao ao anaty boaty feno karaoty hazo na hoditra tongolo. Mitroka hamandoana izy ireo ka tsy lo ny voankazo. Raha efa nihinana paoma ianao nefa te hahavita azy avy eo, manosotra ranom-boasarimakirana vitsivitsy amin'ny sisa amin'ireo voankazo dia atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana; tsy ho maizina na hanimba. 19. Menaka voanio Aza mitahiry ao anaty vata fampangatsiahana - manimba ny tsirony izany.
Ny menaka dia tokony tehirizina amin'ny toerana maizina amin'ny hafanan'ny efitrano. Raha tsy mahita toerana maizim-pito ao an-dakozia ianao dia fonosina amin'ny foil. 20.
Karaoty Tanora karaoty dia azo tehirizina amin'ny toerana maizina sy mangatsiaka, izay hijanonany vaovao sy malefaka mandritra ny fotoana maharitra. Azonao atao koa ny mitahiry azy rehetra mandritra ny ririnina! Hevitra ratsy ny mitazona karaoty ao anaty vata fampangatsiahana, indrindra fa mihidy voatabia na voankazo hafa rehefa lasa mangidy. 21-22.Vary sy lafarinina Ny zavatra voalohany tokony hatao aorian'ny fanangonana lafarinina na oatmeal dia ny famoahana azy ireo avy ao anaty fonosana amidy amin'ny kaontenera vita amin'ny vera na seramika misy sarony tery mba hitazomana ny bibikely sy hanitarana ny fihavaozana, ianao afaka mametraka azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana na toerana maina maina hafa, ny vary amin'ny tranga toy izany dia azo tehirizina mandritra ny taona maro, buckwheat - mandritra ny 3 taona ary oats - mandritra ny 6 volana .23. Watermelon Watermelon (sy melon mahazatra) hitandrina tsara kokoa raha tahirinao ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo amin'ny hafanan'ny efitrano.
mitsoka ny fomba fijery microsoft
Very meloka ireo antioxidant misy azy ireo ny melôna. Raha te hanompo azy mangatsiaka ianao dia apetraho ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 15 minitra. 24. Ny mofo mofomamy dia tokony ao anaty harona plastika, lamba na kitapo taratasy izay afaka mijanona maharitra 5 andro. .
Raha nividy mofo be ianao ary mila miala sasatra mandritra ny andro vitsivitsy, dia azonao atao ny mametraka azy ao anaty vata fampangatsiahana. Ny mari-pana ambany dia miaro azy amin'ny bobongolo ary mijanona ho vaovao sy matsiro izy. 25 Sakafon'ny biby fiompy Eny, ny sakafon'ny biby fiompy dia mety ho ratsy ary tokony hariana avy eo.
Ka ndao hiezaka ny hisoroka io fako io amin'ny fitehirizana azy tsara - mitazona sakafo alika na saka ao anaty fitoeran-javatra mihidy amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, ary raha nanokatra sakafo am-bifotsy ianao dia tazomy ao anaty vata fampangatsiahana ary ampiasao ao anatin'ny 2 andro. 26-27.Café sy dite Tehirizo ny dite sy kafe ao anaty fitoeram-panala maizina ao anaty fitoeram-bolo.
Halaviro ny sakafo fofona mahery. Aza atao toerana mando sy main-masoandro ary mitahiry dite sy kafe tsy misy loharano mafana toy ny mikraoba na ny lafaoro. 28.Sugar Ny fahavalo lehibe amin'ny siramamy dia ny hamandoana - ny hamandoana dia mitarika amin'ny famoronana banga.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitehirizana siramamy fotsy sy volontany ao anaty fitoeram-be amin'ny rivotra any amin'ny toerana maina. Mitroka fofona ny siramamy, koa alao antoka fa tsy misy fofona na inona na inona ilay fitoeranao itahirizanao azy.
Ny sôkôla sôkôla dia tokony tahirizina amin'ny hafanan'ny efitrano amin'ny toerana maina izay tratry ny hazavan'ny masoandro, satria azo antoka. Raha mametraka azy ao anaty vata fampangatsiahana ianao dia hisy sarimihetsika fotsy miforona eo aminy, aza matahotra - dibera kakao fotsiny io. 30.
Fahaverezana Fahadisoana lehibe ny fahandroana lasopy na hamburger mandritra ny herinandro iray manontolo raha tsy hataonao mangatsiaka izy ireo. Ny sisa tavela lava indrindra dia azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana dia 5 andro. Saingy tsy fitsipika iraisan'ny rehetra.
Raha misy mayo ny sakafo dia tokony hohanina ao anatin'ny 2 andro farafaharatsiny. Ny sakafo misy ronono, atody ary yaourt dia tsy azo hanina aorian'ny daty faran'ireo akora ireo. Tsy mandeha ihany izany raha toa ka napetrakao ao anaty vata fampangatsiahana adiny 2 aorian'ny nahandroanao azy ireo ny sakafonao.
Hey, raha nahalala zava-baovao ianao androany dia omeo ny tahaka an'ity lahatsoratra ity ary zarao amin'ny namanao! Ary ireto misy lahatsoratra hafa izay heveriko fa hankafizinao, tsindrio fotsiny ny havia na ny havanana ary mijanona eo amin'ny lafiny mamiratra amin'ny fiainana!
Moa ve ny fampirimana msdtadmin ao anaty fampirimana vonjimaika mila misokatra ny admin?
Folder 'msdtadmin' ao anaty fampirimana vonjimaika dia mila Admin hamafana na hanokatra ny fisokafany ary niezaka mamafa ny folder misy ahy aho ary nandritra ny fizotrany dia nilaza izy hoe: 'Mila Access Administrator hamafana an'ity Folder ity' ary rehefa nanandrana nanokatra azy aho dia miteny Mila Admin Access indray aho.
Ahoana ny fanalana ny msdtadmin amin'ny Windows 7?
Tsindrio indroa ny TFC.exe hampandeha azy amin'ny XP (ho an'ny Vista sy Windows 7 tsindrio havanana ary safidio ny 'Run as administrator') ary raha vao manokatra izy dia tsindrio ny bokotra Start eo amin'ny ankavia havia amin'ny programa mba hamelana azy hanadio. Miangavy mba mahareta ihany fa mety tsy haharitra ela ny fanesorana ireo rakitra temp.
Ahoana ny fakana ny fananana ny rakitra msdtadmin?
Andramo ireto dingana manaraka ireto handraisana ny fananana ny msdtadmin, ary avy eo andramo esory ilay rakitra ary zahao raha manampy izany. Sokafy ny Windows Explorer, ary avy eo dia tadiavo ilay rakitra na folder tianao hananana.
Azonao esorina ve ny msdtadmin avy ao amin'ny McAfee madio madio?
Ny fampiasana McAfee mba hanadiovana haingana dia hitako fa ny rakitra rehetra ankoatra ny msdtadmin dia mety tsy hesorina. Fa maninona no izy ary ahoana no fomba hanary azy? Inona ity?
Hadisoana rafitra wshelper.exe
Hadisoana rafitra Wshelper.exe - fanontaniana mahazatra
Inona no atao hoe ping exe? ping.exe dia fantatra amin'ny hoe TCP / IP Ping Command. Izy io dia rakitra ara-dalàna izay an'ny lozisialy Windows Operating System novolavolain'i Microsoft Corporation. Ny toerana misy anao ao amin'ny PC dia C: \_ Windows \_ System32. Ireo programmer malware dia mamorona rakitra miaraka amin'ny malware ary manome anarana azy ireo aorian'ny ping.exe hanaparitaka virus amin'ny Internet.
kaody hadisoana 0x87e00005
Kaody hadisoana 0x87e00005 - ny fomba fikirakirana
Inona no atao hoe Onenotem EXE? Ny rakitra onenotem.exe tena izy dia singa iray an'ny rindrambaiko ao amin'ny Microsoft OneNote avy amin'i Microsoft Corporation. 'OneNoteM.exe ' dia dingan'ny Microsoft antsoina hoe 'OneNote Quick Launcher, ' hita ao amin'ny 'C: \_ Program Files \_ Microsoft Office \_ OfficeVV \_ onenotem.exe, ' izay 'VV 'dia tarehimarika roa manondro ny kinova Office.
kaody hadisoana 7135
Ahoana no hanitroako an'i Microsoft tsy mamaly? Tsindrio ny dingana. Tsindrio ny bokotra Windows + X ary kitiho ny Device Manager. Hampitombo ny Network Adapter. Kitiho ny tsindrio ny Network Driver ary safidio ny fanavaozana ny lozisialy mpamily. Andraso mandritra ny fotoana fohy ary jereo raha mbola mitohy ny olana. Avereno ny rafitrao.